Filtrer les éléments par date : jeudi, 02 juin 2022
jeudi, 02 juin 2022 11:45
Fanabeazam-pirenena : Hanomboka 5 septambra 2022 ny taom-pianarana 2022-2023
Nankatoavina nandritra ny filankevitry ny minisitra, natao ny alarobia 1 jiona 2022, ny tetiandro natolotry ny Minisitera ho an’ny taom-pianarana 2022-2023.
Tapaka fa hanomboka 5 septambra 2022 izany taom-pianarana izany, ary hifarana ny 23 jona 2023, ka haharitra 36 herinandro, izay hitsinjara vanim-potoana na “période” miisa dimy (05).
Araka ny tolo-kevitry ny Ministera hatrany dia ho tanterahina ny 20 jona 2023 ny fanadinana CEPE, ary ny BEPC kosa dia hatao amin’ny 03, 04, 05 ary 06 jolay 2023.
jeudi, 02 juin 2022 11:38
2 juin : Journée Mondiale pour un Tourisme Responsable et Respectueux
2 juin : Journée Mondiale pour un Tourisme Responsable et Respectueux.
Ady amin’ny Covid-19 : Tsy maintsy hajaina ny fanaovana aro-vava any anatin’ny fitateram-bahoaka
Nohamafisina nandritra ny filankevitry ny minisitra omaly fa Tsy maintsy hajaina ny fanaovana ny aro-vava sy ny fampiharana ireo fepetra sakana amin’ireo toerana mihidy, ka misy olona 200 na mihoatra, ary koa any anatin’ny fitateram-bahoaka (taxi be, taxi brousse, fiaramanidina).
Tsy terena intsony kosa ny fanaovana aro-vava amin’ireo hetsika rehetra atao an-kalamanjana.
jeudi, 02 juin 2022 07:09
Fitrandrahana volamena : Nanangana Vaomiera mpanadihady ny Solombavambahoaka
Nandany ny fananganana ny Vaomiera mpanadihady momba ny fitrandrahana volamena eto Madagasikara ny Solombavambahoaka ny talata 31 mey 2022 tamin’ny alalan’ny tolo-pehikevitra natolotry ny Solombavambahoaka Mohamad Ahmad, voafidy tao Fenoarivo Atsinanana.
Araka ny fanazavana nomen’ity farany dia fomba iray entina hisorohana ny fanondranana tsy ara-dalàna ity fanadihadiana ity. Nambarany ihany koa fa raha voafehy ity sehatra volamena ity dia tsy tokony hindram-bola any ivelany akory i Madagasikara.